Archive du 20190612
Antoko Natiora Miantso ny CENI sy HCC hametra-pialana
Mila avaozina ny tontolo politika eto mba ho an’ny mpanao politika, hoy ny filohan’ny antoko politika Natiora, Mihari-Ni-Rencho, raha nanontaniana ny fahitany ny toe-draharaham-pirenena.
Kandida Nicolas Randrianasolo Tsy mpangala-bato fa tian’ny olona, hoy ny terak’i Betroka
Manoloana ny fanaratsiana nataon’Atoa Paolo Raholinarivo mpanohana ny kandida ho solombavambahoaka IRD any Betroka, Raobelitsirofo Vojanahary, tao amin’ny haino aman-jery samihafa teto
Fandrarana ny tsipoapoaka Nanao fahadisoana indray ny mpitondra…
Manamarika ny fetim-pirenena ny tsipoapoaka saingy manamafy ny tompon’andraikitra ara-panjakana samihafa fa voarara ny fivarotana sy fanapoahana azy amin’izao fotoana.
Haino aman-jery Hakatona izay tsy manara-dalàna
Nilatsaka ny fampitam-baovaon’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina fa anisan’ny asa lehibe iantsorohan’izy ireo ny fanadiovana ny tontolon’ny haino aman-jery.
Canal + Madagascar Handefa mivantana ny lalao rehetra mandritra ny CAN
Ho maimaimpoana ny “décodeur” ao amin’ny Canal + hatramin’ny 30 jona ho an’ireo mpanjifa mampiditra ny tolotra Evasion plus.
Association des jeunes journalistes de Madagascar Hanofana ireo mpanao gazety amina sehatra maro
Hanofana ireo mpanao gazety Malagasy eo amin’ny sehatry ny lalana, ny fanaovana fanatanjahantena ary ny ady amin’ny kolikoly iarahana amin’ny Bianco ny “Association des jeunes journalistes de Madagascar” na ny AJJM,
Mandaitra ve ny fanabadoana ?
Dimy volana nitondrana ny firenena Atoa Andry Rajoelina. Ao ny mety ho tsara fa ao ihany koa ny zavatra mamohehitra afitsoky ny fanjakana.
Fikambanan’ny mpikabary malagasy Mbola hanandratra ny kolontsaina Malagasy
Hamarana ny faha-55 taonany ny 28 jona izao ny fikambanan’ny mpikabary Malagasy na FIMPIMA.
Frantsa Mitokona ny mpiasan`ny fahasalamana
Niparitaka manerana an`i Frantsa ny fitokonana nataon`ny mpiasan`ny fahasalamana.
Iran Toeram-pisakafoanana 547 no nakatona
Toeran-mpisakafoanana, fandraisana olona ambony miisa 547 no voatery nakaton`ny polisy Iranianina tao Teheran noho ny resaka tsy fanarahan-dalàna mifehy ny fisakafoanana.
CNaPS – FJKM Nitohy tany Mevatànana ny fiaraha-miasa
Tanjona iraisan’ny CNaPS sy ny FJKM ny hanomezana fiahiana ara-tsosialy ireo mpiasam-piangonana ao anatin’ny synodam-paritany Maevatànana :
Fakana an-keriny zaza tany an-tsekoly Nidoboka am-ponja ilay vehivavy
Nalefa eny Antanimora vonjimaika ny sabotsy teo rehefa avy niakatra fampanoavana ilay Ramatoa tratra niditra tao amina sekoly iray teny Ambohinambo Talatamaty ny zoma teo ka nanery ankizy mpianatra iray mba hanaraka azy.
Tontolon’ny zavakanto Nindaosin’ny fahafatesana i Donat Rasamimanana
Banga iray indray ireo mpanakanto eto amintsika. Nodimandry omaly maraina mantsy i Donat Rasamimanana,
Zaza very hita faty Ny fanaovana “Autopsie” no hanampy amin’ny fanadihadiana
Ny alatsinainy maraina sahabo tamin’ny 9 ora no hita faty ilay zaza very tamin’ny talata heriny.
Toamasina Tra-tehaka ireo jiolahy mpandroba tranombarotra
Ny harivan’ny alarobia 5 jona teo, voasambotra ny olona dimy lahy anisan’ny mpanao asa ratsy.